"ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးကောင်းခြင်းဟာ IQ မြင့်မားခြင်းထက်ပိုပြီး အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ အလားအလာများတယ်" - YOYARLAY Digital Media and News
မွေးရာပါအရည်အသွေး အပေါ်မူတည်တဲ့ အနာဂါတ်အောင်မြင်မှု ဆိုတာဟာ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လောက်များများ
ရှိနေပါသလဲ? စီးပွားရေးပညာရှင် ဂျိမ်းစ် ဟက်မန်း(James Heckman) က ဒါတွေဟာ လူတွေထင်မြင်နေကြသလို မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ သူက သိပ္ပံပညာရှင် မဟုတ်တဲ့ ပညာတတ်တွေ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ မူဝါဒရေးရာ ချမှတ်သူတွေကို မေးမြန်းချင်နေပါတယ်။ IQ မြင့်မားခြင်း နဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဝင်ငွေ ဟာ ဘယ်လောက်များများ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိသလဲပေါ့? 25% ဝန်းကျင် အလွန်ဆုံး 50% လို့ သူကပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချက်အလက်တွေ အရ 1% နဲ့ 2% သာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ IQ ဟာ အောင်မြင်မှုရဲ့ သာမန် အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဝင်ငွေသိပ်မကောင်းသူတွေ နဲ့ ဝင်ငွေကောင်းသူတွေကြားမှာ ခြားနားနေတဲ့ အရာက ဘာလဲ? တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရင် လူတစ်ယောက်ဟာ အရမ်း ထက်မြက်နေပြီး ဘာလို့ မချမ်းသာတာလဲ?
သိပ္ပံပညာမှာ အဲဒီအတွက် တိကျတဲ့ အဖြေ မရှိပါဘူး၊ ကံတရား ဆိုတာကလည်း သေချာပေါက် ပါဝင် ပတ်သတ်နေတယ်လေ။ နောက်ထပ် သော့ချက်တစ်ခုက ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဖြစ်ပါတယ် လို့ ဂျိမ်းစ် ဟက်မန်း(James Heckman) ကသူရဲ့ စာတမ်းတစ်ခုမှာ ဆိုထားပါတယ်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုက တာဝန်သိတတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တွေဖြစ်တဲ့ လုံ့လဝီရိယ၊ မဆုတ်မနစ်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်၊ ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အစရှိတာတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ပတ်သတ်နေတယ် လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုကောက်ချက်ချနိုင်ဖို့ အတွက် UK,US နဲ့ Netherland တို့မှာ နေထိုင်တဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေရဲ့ သူတို့အချင်းချင်းကြား ဆက်နွယ်မှု၊ IQ ရမှတ်၊ နေထိုင်မှု ဘဝပုံစံ၊ တစ်ကိုယ်ရည် စဉ်းစားချင့်ချိန် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အစရှိတဲ့ အချက်အလက် လေးခုအပေါ် အကဲဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တချို့အချက်အလက်တွေဟာ ဆိုရင် ဆယ်စုအကြာက လူတွေ ကို လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေ ရရှိမှု ကိုသာ မဟုတ်ပဲ ရာဇဝတ်မှု မှတ်တမ်း၊ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်ပုံ၊ ကိုယ်တိုင်ရေး ဘဝနေပျော်မှု မှတ်တမ်းတွေက အစ ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှုက တွေ့ရှိတာကတော့ အဆင့်အတန်းနဲ့ အောင်မြင်မှု စမ်းသတ်ချက် ရလဒ်တွေဟာ IQ ရလဒ် အကြမ်းဖျဉ်းအရ အောင်မြင်မယ်လို့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းသူတွေထက် သိသာစွာ ကောင်းမွန်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အံဩဖွယ်ရာ သိလာပြီးတဲ့နောက် “သူတို့ဟာ တူညီတဲ့ အရာတွေ အကုန်လုံးကို မတိုင်းတာခဲ့လို့လား? မဟုတ်ပါဘူး။အဆင့်အတန်းတွေဟာ ဥာဏ်ရည်အတိုင်းအတာ ပေါ်မှာတင်မဟုတ်ပဲ ဟက်မန်း(Heckman) က Non- Cognitive skill ( သိမြင်ခွင့်မရတဲ့ အရည်အသွေး) လို့ခေါ်တဲ့ ဇွဲ ၊လုံ့လ ဝီရိယ ၊ကောင်းမွန်တဲ့ လေ့လာမှု အလေ့အထ၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစွမ်းရည် အစရှိတာတွေ အပေါ်ပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာပါ။ နည်းပါးတဲ့ ပမာဏမှာ စမ်းသပ်မှု ရလာဒ် တွေဟာ အတူတူပါပဲ။ တစ်ဦးချင်း ရေတွက်ထားတာပါ။
2000 ခုနှစ်မှာ Nobel Prize ရရှိခဲပြီး University of Chicago”s Center for the Economic of Human Development ရဲ့ တည်ထောင်သူလည်း ဖြစ်တဲ့ Heckman ကတော့ အောင်မြင်မှုဆိုတာ မွေးရာပါ အရည်အသွေးတွေတင်မဟုတ်ပဲ သင်ယူလို့ ရတဲ့ အရည်အချင်းတွေ အပေါ်လည်း မူတည်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သူရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လေ့လာချက်ကတော့ ကလေးဘဝကိစ္စတွေဟာ အကူအညီ ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ တာဝန်သိတတ်ခြင်း ဆိုတာဟာ IQ ထက်ပိုမို ကျယ်ပြန့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စူးစမ်းလေ့လာချင်စိတ် အပါအဝင် ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဖော်ပြချက်တွေဟာ ရလဒ်တွေ နဲ့ အဆင့်အတန်း စမ်းသပ်ချက်တွေကို ဆက်နွယ်နေပါတယ်။
တစ်ကယ်တန်း IQ ဟာ အရေးပါနေတုန်းပါ။ IQ 190 လောက်လူ တစ်ယောက် လုပ်နိုင်တာတွေကို IQ 70 သမားလောက်က လုပ်နိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ဟက်မန်း(Heckman) ပြောတာကတော့ လူတွေ အလုပ်ဈေးကွက်ထဲကို ထိုးဖောက်မလာနိုင်တာဟာ သူတို့မှာ ဥာဏ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ အရည်အသွေး မရှိလို့ပါတဲ့။ သူတို့ဟာ အလုပ် အင်တာဗျူး တွေမှာ ဘယ်လို လောကဝတ် ပြုရမယ်ဆိုတာ နားမလည်ကြဘူး။ ဝတ်စားဆင်ယင်တာ ခေတ်နောက်ကျမယ်၊ သင့်လျော်အောင် မဝတ်တတ်ဘူး။ အလုပ်မှာလည်း လုပ်နိုင်တာထက် ပိုလုပ်မှာ မဟုတ်တာက သေချာပါတယ်။
စာရေးဆရာ ဂျွန် အဲရစ် ဟမ့်ဖရေးစ် (John Eric Humphries) ကတော့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းတွေ ဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ နားလည်မှုလွဲမှားလောက်အောင် ရှုပ်ထွေးတဲ့ ကိစ္စတွေအပေါ်မှာ သိသာစွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ မျှော်လင့်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းတွေကို အကဲဖြတ်ဖို့ ပုံစံလုပ်ထားတဲ့ IQ test တွေဟာတောင်မှပဲ ထက်မြက်တယ် ဆိုတာထက် ပိုတဲ့ အရာတွေကို တိုင်းတာဖို့ ရှိလာနေပါပြီ။ ပန်ဆယ်ဗေးနီးယား တက္ကသိုလ်(Pennsylvania University) က စိတ်ပညာရှင် အန်ဂျလာ ဒက်ဝါ့သ်(Angela Duckworth) ရဲ့ အဆိုအရ IQ ရမှတ်တွေဟာ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုနဲ့ အလုပ်ကြိုးစားမှု အပေါ်ကို သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။စိတ်ဓာတ် တက်ကြွမှု၊ကြိုးစားအားထုတ်လိုမှု ရှိတဲ့သူတွေက ဥာဏ်ရည်ခြင်းတူပေမယ့် အနည်းငယ် ပျင်းရိတတ်တဲ့သူတွေထက် ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖြေဆိုဖို့ ပိုမိုကြိုးစား အားထုတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး နဲ့ ပြောဆိုပြုမူပုံတွေကို ကျောင်းမှာ သင်ပေးလို့ မရပါဘူး။ IQ မြင့်လေကောင်းလေပါ၊ဒါပေမယ့် တာဝန်သိတတ်ခြင်း ဟာလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး လေ့လာသူတွေကတော့ သင်ဟာ သင်မပြောနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ မပြောဘဲ မနေနိုင်တာမျိုး၊ နားထောင်ရမယ့် ကိစ္စတွေမှာ အတင်းပြောဆိုနေချင်တာမျိုးတွေ မလုပ်ပဲ အလယ်အလတ်ပုံစံသာ ပြုမူသင့်ကြောင်း အကြံပြုပါတယ်။
Previous Previous post: လူပေါင်း ၁၇ ဦးသေဆုံးအောင် သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ဆယ်ကျော်သက်ကို သေဒဏ်ပေးဖို့ ကြိုးပမ်းနေ
Next Next post: V14 EV dynamic range အထိ ရနိုင်တဲ့ AI-Powered Super HDR ကို ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တဲ့ Vivo
နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၈) ခု
သင်ကတော့ နေ့ရက်တိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့နိုးထလာတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရေအးအေးလေးနဲ့ ရေချိုးပြီး အလုပ်သွားတဲ့အခါ လမ်းမှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ယာဉ်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုကြောင့် စောစောက အတွေးလေးတွေဟာ တစ်စစီ လွင့်ပြယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ တစ်နေ့တာဖြတ်သန်းမှုပုံစံကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁။…
Published: April 5, 20188:11 am Updated: May 8, 20193:32 pm